December 2013 | MAUNG RUPER
DriverEasy Professional 4.6.3.3060 +Patch -FinaL
zaw hlaing win pc/laptop No comments
PC ဒါမှမဟုတ် Laptop အတွက် Driver ပြသာနာရှိသူများ နဲ့ Driver လိုအပ်နေသူများအတွက် DriverEasy Professional နောက်ဆုံးထွက် Version လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီကောင်လေးက အသုံးပြုရလွယ် ကူတဲ့အတွက် လူသုံးများပါတယ်။ Computer နဲ့ Hardware Device တွေမှာ Detect မသိခဲ့ဘူး Driver မရှိဘူး ဆိုရင် DriverEasy Professional ကဆောင်ရွက်ပေးပါလိမ့်မယ်။ မိမိမှာရှိထားပြီးသော Driver များကို Back/Restore ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း ၊မလိုအပ်သော Driver များကို Uninstall ပြုလုပ်ပေးနိုင်ခြင်း ၊ Window အား Update ပြုလုပ်ပေးနိုင်ခြင်း ၊ ရှိထားပြီးသော Driver များကို Update ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း စတာတွေအပြင် အခြား လုပ်ဆောင်ချက်များစွာကိုလည်းပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ လုပ်ဆောင်ချက်အသေးစိတ်ကိုတော့အောက်မှာ ရှင်းပြထားပါတယ်ဗျာ။ File Size ကလည်း 3.01MB လေးဘဲရှိတဲ့အတွက် ဒေါင်းဖို့အဆင်ပြေပါတယ်။ အမြဲ တမ်းသုံးနိုင်အောင် Full Version အဖြစ် Path file ကိုထည့်ပေးထားပါတယ်ဗျာ။
Maung Ruper blog နည်းပညာ No comments
USB Flash Drives နဲ့ Memory card တွေမှ Shortcut Virus Error ဖြေရှင်းနည်း
zaw hlaing win Usb-Memory, virus နဲ.ပက်သက်သမျှ No comments
USB Flash Drives တွေနဲ့ Memory card တွေမှာ အဖြစ်များတဲ့ Shortcut Virus Error ကို အလွယ်တကူ ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်...။
Start က Search Box မှာ cmd ရေးပြီး Command prompt ကိုဖွင့်ပါ ..
အပေါ်က စာတွေကို Copy ကူးထည့်၍ဖြစ်စေ ရေး၍ဖြစ်စေ ထည့်ပြီး Enter ခေါက်ပါ... အနီရောင်နဲ့ g က
မိမိရဲ့ Drives နာမည်ပါ....
သူ့ဘာသူ အလုပ်လုပ်နေပါလိမ့်မယ်.. ပြီးသွားရင် USB/Memory Card ကို ဖြုတ်ပြီး ပြန်တပ်ကြည့်ပါ
Shortcut Error မရှိတော့တာတွေ့ရမှာပါ...။
Software နဲ့ အလွယ်တကူ ဖြေရှင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ Software လေးကို Downloat Shortcut Remover ဒေါင်းယူပြီး Click နှစ်ချက်နဲ့
Run လိုက်ပါ .. (USB/Memory Card) ကို စက်မှာ တပ်ထားပြီးသားဖြစ်နေပါစေ..။
Size : 124.5KB ပဲ ရှိပါတယ်...
မိမိရဲ့ Drives နာမည်ကို ရေးထည့်ပြီး Enter ခေါက်ပါ...
အပေါ်ကပုံအတိုင်း ပေါ်လာရင် Keyboard ပေါ်က Key တစ်ခုခုကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ...
zaw hlaing win Android Application, Android Root No comments
Root လုပ်တဲ့ဆော့ဝဲထဲမှာ ဆရာကြီးလို့
အမည်တပ်ရအောင် နာမည်ကြီးပြီး တကယ်ကောင်းတဲ့
Vroot လေး 1.7.4 လေး ထွက်ရှိလို့ လာခဲ့ပါပြီ
Auslogics BoostSpeed လေးသုံးပြီး အင်တာနက်ကို မြန်ဆန်စေမယ်
zaw hlaing win computer No comments
Face Off Max35 86Incl Patch
zaw hlaing win computer 1 comment
ဒါလေးက ကိုယ်မျက်နှာ၊ ဒါမှမဟုတ် မျက်နှာတစ်ခုခုကို အခြားခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုခုမှာ သွားအစားထိုး
ချင်ရင် အလွယ်တကူသုံးလို့အဆင်ပြေအောင် အသင့်သုံး Software လေးပါ။
ပုံတွေကို ခပ်ဆန်းဆန်းတည်းဖြတ်ရတာကြိုက်နှစ်သက်သူများ အတွက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ရှေ့မှာလည်းတင်ပေးခဲ့ဖူးပါတယ် အခုက Latest Version လေးပါ။
Viber For PCမှာမိမိစိတ်ကြိုက် Ringtoneပြောင်းနည်း
zaw hlaing win computer, နည်းပညာ No comments
Viber For PCမှာမိမိစိတ်ကြိုက် Ringtoneပြောင်းနည်း ********************************** အားလုံးဘဲ ဒီနေ့တင်ပြပေးချင်တာကတော့ PCအတွက် Viberမှာ Ringtoneပြောင်းနည်းလေးပါ။ ကျွန်တော်လည်း နည်းပညာဆိုဒ်တခုမှာ ဖတ်မိတာကြာပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ SEA Gameကို အားပေးမူတွေနှင့် စာမေးပွဲတွေရှိလို့ အခုမှတင်ပေးဖြစ်တာပါ။ သိတဲ့သူတွေလည်း ရှိမှာပါ။ ကျွန်တော်တင်တဲ့Postများသည်မသိသေးသောသူများအတွက်ဘဲရည်ရွယ်ပါတယ်။ မိမိရဲ့ PCမှာ Viberရဲ့ Ringtoneကို Default Ringtoneအစား မိမိကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ Ringtoneလေးပြောင်းလဲချင်ရင်တော့ အောက်ပါအတိုင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်-http://goo.gl/LV2oMf
zaw hlaing win samsung galaxy tabled No comments
How to Root Samsung Galaxy Tab310.1 P5200/P5210 **************************************** Samsung Galaxy Tab310.1 အတွက် Root ပြုလုပ်နည်းကို လက်တွေ့ စမ်းစရာမရှိသေးလို့ မူရင်းအတိုင်းတင်ပေးလိုက်ပါတယ်..။ Root လုပ်နေကျဆိုရင်...အဆင်ပြေမှာပါ... အောက်မှာ တဆင့်ချင်း ပြပေးထားပါတယ်..။ http://www.aungkyaw.net/2013/12/how-to-root-samsung-galaxy-tab-3-101.html
zaw hlaing win computer software, video edictor No comments
(32bit Window မှာ Video တည်းဖြတ်ချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက်)
ဗီဒီယိုတည်းဖြတ် ချင်သော သူငယ်ချင်းတွေအတွက် CyberLink PowerDirector9လေး တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။ မိမိရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကို ဖြတ်တောက်ခြင်း ၊ ဆက်ခြင်း ၊ အလင်းအမှောင်.. effect စာတန်း ထည့်ခြင်း စတဲ့အရာတွေ ကိုစိတ်တိုင်းကျလုပ်လို့ရတဲ့ အကောင်းဆုံး ဗီဒီယိုရုပ်သံ တည်းဖြတ်တဲ့ဆော့ဝဲတခုပါ။
Magic, Corel Video Editor ဆော့ဝဲတွေထက်ပိုပြည့်စုံပါတယ်။ Window 23bit အတွက် အသုံးပြု နိုင်အောင် လို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ။ အရင်ကတင်ပေးလိုက်တာ Window 64bit သက်သက်ပြစ်နေတော့ 32bit သုံးသမားတွေ အဆင်မပြေ ဖြစ်နေလို့ 32bit သုံးနိုင်အောင် အရင်ထွက် Version ကို ပြန်ရှာပြီး တင်ပေး လိုက်တာပါ။
Video တည်းဖြတ် ၊ ကာရာအိုကေစာတန်းထိုး ၊ Effect အမျိုးမျိုး စုံလင်စွာ သုံးနိုင်သလို ကျနော်အကြိုက်ဆုံး တည်းဖြတ်ဆော့ဝဲလ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သုံးရတာ လွယ်ကူသောကြောင့် တည်းဖြတ် ၀ါဒနာ ပါတဲ့ သူတွေ တကယ်ဆောင်ထားသင့်ပါတယ်။
CyberLink PowerDirector ရဲ့ Effect ၃သောင်း ကျော်ကို ဒီလင့်မှာ ၀င်ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။ အသုံးပြုနည်းတွေပါ အပြည့်စုံ ရေးထားပေးပါတယ်။
File Size- 774MB
Download CyberLink PowerDirector 9.00.2330 with key
CyberLink PowerDirector 9.00.2330 ကို Install နည်းကတော့
CyberLink powerdirector 9.00.2330 ရဲ့ Folder ထဲက ဖိုင်ကို အရင်ဆုံး Install မယ်။
ပြီးရင် Text ဖိုင်ထဲက Key ကို ထည့်ပေးပါမယ်။
Key ထည့်ပြီးရင် CyberLink PowerDirector ကို ခနပိတ်လိုက်ပါ။
နောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့ Update ရဲ့ Folder ထဲကဖိုင်ကို Install လုပ်မယ်။
အပေါ်ကပြတဲ့ အဆင့်တွေ အားလုံးပြီးရင်တော့ CyberLink PowerDirector 9.00.2330 က Full Version အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။ အဆင်မပြေရင် Teamviewer ထည့်ပြီး zawmintan@gmail.com ကိုအက်လာပါ။ အသုံးပြုနည်းကတော့ အပေါ်ကပေးထားတဲ့ လင့်ကနေ စာအုပ်ဝင်ဒေါင်းပြီး လေ့လာပေါ့။
Facebook Page -https://www.facebook.com/pages/Nayzawlin1/292530074131729
Auslogics BoostSpeed လေးသုံးပြီး အင်တာနက်ကို မြန်ဆ...
Facebook မှာ ၀ှက်ထားတဲ့ email နဲ့ ID ကို မြင်အောင်...
ိDISK CLEANUP အော်တိုပြုလုပ်ခိုင်းခြင်း
Android ဖုန်းအတွက် အသင့်တော်ဆုံး စွယ်စုံသုံး - And...
iOS7 Calculator For Android
Samsung မှ ဖုန်းအသစ် တစ်မျိုး ထုတ်ပြန်ပြီ (Galaxy ...
အရောင်စုံ Galaxy Note3တွေ မကြာခင် ရတော့မည်
Ocean HD Live Wallpaper v1.7.1 Apk
Mediafire ထက်သာလွန်သော Myanmar Files Hosting + Mak...
Fedora 19/18/17, OpenSUSE 12.2/11.4 And CentOS6ေ...
ဘာဆော့ဝဲလ် မှ မသုံးပဲ မိမိတို. IP ကိုဖျောက်ထားမယ်
အရမ်းမိုက်‌တဲ့ Call Black List Apk ‌လေးပါ
Viber For PC Version မှာ မြန်မာလို 100% ရေး/ဖတ် နိ...
Facebook v 5.0.0.0.13.APK (Latest Version)
လုံခြုံစိတ်ချ Maxthon Cloud Browser နော်ကဲ့စမ်းသုံ...
Linux/Fedora OS (Desktop & Server) မှာ Fedup သုံြး...
Android 4.4 KitKat တွင် Myanmar Unicode Font တရားဝ...
Activated ဖြစ်ပြီးသား Ashampoo Burning Studio 14.0...
Fake Serial လုံးဝ မဖြစ်တဲ့ နောက်ဆုံးထွက် Internet ...
Zaxwerks ProAnimator v7.0.0 (plugin After Effects)...
အကောင်းဆုံး Launcher တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Next Launcher 3D...
Pocket Girlfriend Apk v1.29 (အသက်18နှစ်အထက်ယောက်ကျ...